Iindaba -Ukuzenzela ngokwakho, uphethe i-tripod
Ukuzenzela izinto ezintsha, uphethe i-tripod
Inkqubo yokuPhawula i-S400 yezirinji ezilahlwayo
• Ukulebhelisha okuzenzekelayo kunye nendibano yeplunger Isantya esimileyo: 400pcs / ngomzuzu;
• Ityhubhu yenaliti yokutyhiliza, ukutyhala intonga yokutyhala, ibar torsion kunye nelebheli yolwakhiwo lweCompact ngezinto ezikumgangatho ophezulu;
• Inokudityaniswa okanye isebenze yodwa;
Ukuphulukana neelebheli, ukuphoswa kwekhowudi, ukubonwa kweplagi yerabha kunye nokususwa okuzenzekelayo;
• Ukukhetha ikhowudi ye-spurt, ikhowudi yokuprinta, ikhowudi ye-laser ...
• Ikhowudi yokukhetha yokukhetha, ikhowudi yokuprinta, ikhowudi ye-laser ...
• Ukulebhelisha okuzenzekelayo kunye nendibano yeplunger Isantya esimileyo: 200pcs / ngomzuzu.
Izixhobo ziphuhliselwe indibaniselwano yokudityaniswa kwebar okuzenzekelayo, indibaniselwano yokunyusa, indibaniselwano yokhuseleko ngokudibeneyo okanye iimpahla zangaphandle zesikwere kunye neelebheli yesirinji ekhethiweyo. Xa uqhagamshela kunye nomatshini wokufaka ityhubhu ozenzekelayo kunye nesixhobo sokucheba ipali esizenzekelayo, inokugqibezela imisebenzi yenaliti ityhubhu de-nesting, ukutyhala intonga, ukudibanisa indibaniselwano, indibaniselwano ye-torsion bar, indibaniselwano yangaphandle kunye neelebheli. Ulawulo lwe-torque oluchanekileyo luqinisekisa ukuba iplagi yerabha ayitshintshi ngexesha lokujija, ngaxeshanye, ngokubonakalayo ukubona ukuba intonga yokutyhala ikho okanye iqine kakhulu.
Isixhobo sonke sokufumanisa umatshini ukuqinisekisa ukuthembeka kwemveliso
1. Isixhobo sokubona ukufuduswa kweplagi yerabha sifakwa kwisikhululo seentonga esijikelezayo, kwaye umsantsa ophakathi kwentsimbi yokutyhala kunye nomphezulu weplagi yerabha ungasetwa kwi-0.2-0.5 ml iyimveliso efanelekileyo. Ukuba likhulu okanye lingaphantsi kolu luhlu lwexabiso, kuya kufunyanwa ukungafaneleki.
2. Ngokweemfuno zomthengi ezinokukhethwa zinokubonwa, inkqubo yokubona ebonakalayo yamkela iiBasler zaseJamani ezithunyelwe ngaphandle. Iimveliso ezingafanelekanga ukwazisa okanye ukuphelisa.
Ixesha Post: Jan-07-2021
Phezulu kunye nasezantsi kwelebheli, Umatshini wokuTywina wePlastiki, Indibano yesirinji kunye neNkqubo yokuPhawula, Umshicileli weLayibhile yeeBhotile zeJar, Umatshini wokuPhawula iBhotile yoRhwebo, Umatshini wokufaka iilebheli kwiibhokisi,